आमाका लागि वेबसाइट - स्मार्ट होममेकर - नारी
आमाका लागि वेबसाइट
सन् २००२ देखि अभिभावकहरूको विश्वास जित्न सफल यो वेबसाइट सुखद् मातृत्व, महिला स्वास्थ्य तथा बालबालिकाको स्याहारसम्बन्धी जानकारीले भरिएको छ । यहाँ आमाहरूका लागि सार्वजनिक मञ्च पनि उपलब्ध छ । यसले गर्भधारणदेखि जीवनशैली परिवर्तनसम्मका कुरामा आमाहरूलाई सल्लाह दिन्छ ।
यो वेबसाइट नामजस्तै आमाका लागि मात्र होजहाँ मातृत्वका विभिन्न पक्षका जानकारी, सूचना, सल्लाह अनि विभिन्न औजारहरू छन्, जसले शिशुका साथै आफ्नो स्वास्थ्यका बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न मद्दत गर्छन् । यसमा शिशु जन्माउने योजना, गर्भवती क्यालेन्डर, शिशुका नामको खोजी, शिशुको मासिक वृद्धि जान्ने उपाय आदि जानकारी राखिएको छ । यसमा शिशुलाई कसरी सुताउने, ख्वाउनेदेखि स्कुलको पढाइ अनि आफ्नो पारिवारिक जिन्दगी आदि सबै विषयमा सल्लाह
उपलब्ध छ ।
यो वेबसाइटले गर्भधारण र अभिभावकत्वलाई बढी जोड दिएको छ । यसको गर्भ पात्रोले गर्भधारणको पहिलो सातादेखि नै शिशुको वृद्धिदर कहिले कस्तो हुन्छ भन्ने जानकारी दिन्छ । गर्भका बारेमा सबै खालका सूचना दिने यो वेबसाइटले खानपिनका बारेमा समेत सल्लाह दिन्छ । यो साइटले शिशु जन्माइसकेपछि उनीहरूलाई पहिलो पटक घर लाँदादेखि टिनएजमा पुग्दासम्म कस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने समेत सुझाव दिन्छ ।
यो वेबसाइटबाट मातृशिशु स्वास्थ्यका विभिन्न पक्षमा जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ । यसले गर्भावस्थामा खानुपर्ने कुराहरू, पोषणदेखि लिएर मनोरञ्जनसम्मको सल्लाह दिन्छ । यसमा गर्भावस्थामा गर्नुपर्ने र गर्न नहुने कुराहरू, स्वास्थ्य, गर्भपात आदिका विषयसँगै परिवार, श्रीमान् तथा शिशुको हेरचाह, घर आदिका बारेमा समेत जानकारी दिन्छ । यसमा गर्भवतीका लागि सहयोगी र उपयोगी ब्लगहरू समेत उपलब्ध छन् ।
कार्यालयको हाकिमलाई आफू गर्भवती भएको कुरा कहिले भन्ने ? गर्भवती भएका बेला नङ पालिस लगाउन हुन्छ कि हुँदैन ?, कफी खान हुन्छ ? आमा बन्न लागेका महिलाहरूको मनमा उब्जने यस्ता प्रश्नको जवाफ नै यो वेबसाइटको सशक्त पक्ष हो । मातृत्वका लागि समर्पित यो वेबसाइटमा गर्भवती भएको कसरी जान्नेदेखि शिशुको नामकरण, हेरचाह, खाना, परिवार व्यवस्थापन, खेलौना आदि विविध विषयका जानकारी समेटिएको छ । शिशुको पढाइदेखि उसका लागि आवश्यक पर्ने साधनहरूको
खरिद कसरी गर्ने सबै जानकारी द बम्पमा उपलब्ध छ ।
वैशाख २, २०७५ - नसर्ने रोगका लागि फिजियोथेरापी
चैत्र २०, २०७४ - रोजगारीका लागि असल शासन चाहिन्छ
चैत्र १९, २०७४ - हरियो तरकारी स्वस्थ जीवनका लागि
फाल्गुन २१, २०७४ - समृद्धिका लागि नारी शिक्षा अपरिहार्य
फाल्गुन १५, २०७४ - एनिभर्सरी पार्टीका लागि मेकअप तथा हेयर स्टाइल
फाल्गुन १०, २०७४ - विवाहका लागि कानुनी प्रक्रिया र मान्यता
थप केही स्मार्ट होममेकरबाट
इन्टेरियरमा डायनिङ आर्ट पुस १८, २०७५
सुविधाजनक फ्लोरिङ सुकुलदेखि तातामीसम्म मंसिर २८, २०७५
हाइजेनिक भान्सा मंसिर १४, २०७५
दराजले गर्छ कोठा व्यवस्थापन मंसिर ११, २०७५
इन्टेरियरमा लाइट कार्तिक २०, २०७५
भान्साका सामग्रीको केयर आश्विन २३, २०७५